KAHORTAG FAAFIDA CUDURKA CORONAVIRUS
Adigu waad ka qayb qaadan kartaa kahortaga cudurka COVID-19 ee kufaafaya gobolka Alberta. Kahortagu wuxuu ka bilaabmaa wacyi galinta.
Ka fogoow dadka kale
Is go’doomi haddii aad xanuusato
Udhaq gacmaha si joogto ah
Qufaca iyo hindhisada dabool
Iska ilaali inaad wajigaaga taabato
Haka dhoofin meelka baxsan Canada
KU DHAQAN XEERARKA KALA FOGAANSHAHA
Dhamaan dadwaynaha kusugan Alberta waxaa saaran masu’uliyadda kahortaga cudurka COVID-19.
Qaad talaabooyin aad ku badbaadiso naftaada iyo bulshada:
Xadid ka bixida gurigaaga.
2 meter udhaxaysii adiga iyo qofwalba markaaad ubaxdo adeeg, socdaal caafimaad iyo wixii mihiim ah
Iskuday in adeega aad ubaahato laguu keeni karo
Haddii aad guriga kabaxdo 2 meter isudhaxysii adiga iyo dadka kale
Iska ilaali meelaha xidhan sida wiishka marka ay dad badan kujiraan
Gacmaha dhaq mar walba oo aad taabato albaabada ama gacan-qabsiga jaranjarada.
Dib udhig booqashada ehelka iyo qaraabada, khaasatan haddii ay yihiin wayeel ama haddii ay halis uyihiin xaalad caafimaad oo kale
Hala kulmin dad kale haddii aad isku aragto xumad/qandho ama qufac, sikasta oo ay ufudud uyihiin
Adeec shuruucda Kafogaanshaha iyo is booqashada mamnuucaysa ee udajisan Alberta
ILAALI CALAAMADAHAAGA CAAFIMAADKA
COVID-19 calaamadihiisu waxay u egyihiin calaamadaha hargabka ama cudurada kudhaca sambabada iyo neefta
Haddii aad calaamadahaas isku aragto guriga joog oo is go’doomi; ha aadin dhakhtarka ama rugaha caafimaadka. Wac lambarka caafimaadka ee 8-1-1, lambarkan ood ka helo karto daryeelayaal ku hadli kara ilaa iyo 240 luqadood si aad u hesho caawin sax ah
Sharigu wuxuu kufarayaa in aad is go’doomiso haddii aad:
14 maalmood haddii aad kaso noqotay safar dibada ah, ama aad la kulantay qof qaba cudurka COVID-19
10 maalmood hadaad qabtay qofac, xumad, neeftuur iyo cuna xanuun aadan hore u lahaan jirin
Haddii aad kujirto is go’doomin:
Guriga joog-- Ha shaqo tagin, meelaha bulshadu isugu timaado ha tagin.
Iska ilaali in aad udhawaatid dadka kale, ay kujiraan dadka guriga kugula nool khaasatan dadka waawayn iyo dadka halista u ah xaaladaha kale ee caafimad
Ha isticmaalin Gaadiidka bulshadu isticmaasho, qofna ha la korin gaadhi
Ha ubixin lugabaxsi ama socod. Sidoo kale arrintani xitaa waxay khuseysaa caruurta/dhalinyarada kujira xaalada isgo’doominta waajibka ah
Haddii aad baxayso waa in ay ahaato meel adiga kuu gaar ah oo dadka kale aanay so gali karin
Haddii aad kunooshahay guryaha daaraha dhaadheer ah, waa inaadan ka bixin guriga, sidoo kale ha isticmaalin wiishka ama jaranjarada. Haddii daaradaadu/balakoon-kaagu gaar kuu yahay oo ujiro ugu yaraan 2 meter balakoonada kale, waad u isticmaali kartaa balakoonkaaga hawoqaadasho
Barnaamijyo cusub oo dowladda Alberta ee soo saartay
Dawladda Alberta waxay ku sii kordhineysaa barnaamijyo cusub oo la xariirka bulshada ah waxayna si gaar u taageereysaa bulshooyinka leh heerar aad u sarreeya oo ah kala qaadista iyo gudbinta KOOFID-19
Hate-motivated assaults: Joint statement
December 16, 2020 Media inquiries Minister of Culture, Multiculturalism and Status of Women Leela Sharon Aheer, Minister of Justice and Solicitor General Kaycee Madu, Minister of Community and Social